सूर्य को प्रतीक। "सौर" संसारको विभिन्न देशहरुमा देवताहरूका
सूर्य - जीवन र प्रजनन को स्रोत। मानिसजातिको, पृथ्वी वार्मिंग प्रकाश र ग्रह जगतले inhabiting को आनन्द दिने, हल्का लागि लामो छ। तसर्थ, लगभग हरेक राष्ट्र तिनीहरूले उपासना र उपहार ल्याए, सूर्य को आफ्नो प्रामाणिक प्रतीक थियो।
रूस, घटता संग तथाकथित पार मा। Kolovrat - को Slavs बीचमा सूर्य को प्रतीक, हाम्रा पुर्खाहरूले "solstice" को रूपमा, वा बस "परिक्रमा" उपचार थिए। आभूषण को रूप मा आफ्नो छवि अक्सर चर्च, vestments र को iconostasis र वेदी लागू हुन्छ वेशभूषा, सैन्य हतियार र ब्यानरहरू दस्तों, घरहरू र घरेलू बर्तन को छतों। पनि यो दिन हामीले यी चित्रहरू को टुकडे संरक्षित: तिनीहरूले नोभगोरोड, कीव र Chernigov पुरातन चर्च मा देख्न सकिन्छ। तर स्लाव भाषाहरु बस्तियों र दफन Mounds को उत्खनन धेरै शहर जसको रेज गर्न चार कार्डिनल अंक औंल्याए Kolovrat, स्पष्ट फारम भनेर देखाउँछ।
Jari-प्रतीक सूर्य, प्रतिनिधित्व मौसम को परिवर्तन र अनन्त ज्योति। उहाँले नरक र मानव आक्रमण को दुष्ट देखि शक्ति, सुरक्षा पर्दाफास छैन, मानिसहरूको लागि थियो। कुनै आश्चर्य चिन्ह रातो मा चित्रित युद्धमा गए जो साहसी सैनिकहरू ढाल। Kolovrat धेरै शताब्दीयौंदेखि हाम्रो Gallant पुर्खाहरूको अन्य मानिसहरूका र कुलहरूको invasions सफलतापूर्वक प्रतिरोध त्यसैले, विरोधीहरूले Rusich बीच आतंक कारण।
मूर्तिपूजक रवि भगवान
उहाँले वर्ष को समय मा निर्भर गर्दछ, चार incarnation थियो:
सूर्य-बच्चा Kolyada। जाडो प्रकाश, कमजोर र defenseless। को डिसेम्बर solstice को रात पछि प्रारम्भिक बिहान जन्म।
सूर्य-केटा Jari। Fledgling तारा, को महाविषुव देखिने।
सूर्य-पति Kupaylo। मा आकाश मा ल्याइने छ जो शक्तिशाली प्रकाश, को ग्रीष्मऋतुक्रान्ति।
सूर्य-पुराना Svetovit। वृद्ध र बुद्धि शाइन, को शरत्काल विषुव अंकन।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सूर्य प्रतीक निरन्तर हाम्रो पुर्खाहरूको पात्रोमा मात्र छैन वर्ष को समय को परिवर्तन, तर पनि Astronomical घटना मा इशारा विशेष छ। यी चार दिन Slavs संगठित नृत्य र चाडहरूमा, देवहरूलाई बलिदान चढाए र आफ्नो औपचारिक गीतहरू प्रशंसा जुन बेलामा महत्त्वपूर्ण मूर्तिपूजक छुट्टी थिए। साथै, हल्का निरन्तर अन्य समारोह मा समझ छ। मेला एक प्रतीक - उदाहरणका लागि, यो छ। प्यानकेकहरू को रूप मा embodied को जाडो तार समयमा सूर्य: यसरी हाम्रा पुर्खाहरूले एक स्टार भनिन्छ र धरती न्यानो गर्न उठ।
यदि पुरातन Slavs धेरै समारोह समयमा मानव Kolovrat को मुख्य संरक्षकको र मेला सूर्य को प्रतीक थिए, विश्व सौर संकेत को अन्य जातिका त व्यापक वितरण थिएनन्। निस्सन्देह, सूर्य संसारभरि revered थियो, तर केवल जताततै सानो घरेलू वस्तुहरु अन्त्य, को घरदेखि सुरु, आफ्नो छवि आकर्षित rusichi। तिनीहरूले पनि सूर्य चीललाई को प्रतीक हो भनेर विश्वास गर्थे। तर पनि अधिक यो गर्व चरा को पंथ ग्रीस र चीन मा पूजा गरिएको थियो।
यी मानिसहरू चीललाई कुनै संयोग छ रोजे: आफ्नो उडान, जीवन ज्योति को रेज द्वारा उज्यालो थिए बादल मा सधैं छ। मान्छे चरा देवहरूको एक दूत थियो विश्वास, त्यसैले यो तारा उड सक्छ, र पनि यो संग मर्ज। यो चील आकाश मा ऊंची उडान भरना गर्न सक्ने आत्माको उचाइ र बल सङ्केत। उहाँले गर्जन र बिजुली बीच आकर्षित भने, उहाँले साहस र कुनै पनि कठिनाइ हटाउन क्षमता औंल्याउनुभयो। विजय को एक प्रतीक - होमर बाहेक चरा नंग्रा एक सर्प समातेर भनेर दावी।
अन्य जातिका सूर्य प्रतीक
Shone विशेष गरी पेरु र मेक्सिको मा बस्ने भारतीयहरुलाई द्वारा revered। को Slavs, को युनानी र चिनियाँ जस्तै, तिनीहरूले आफ्नो पंख अक्सर एक व्यक्ति एक निश्चित स्थिति दिने र उहाँलाई सुरक्षा दिने, आफ्नो टोपी सजाया गरिन्छ, चील उपासना गर्थे। साथै, इंकएक तारा एक डिस्क आकारको को सुनको अनुहार मानिसको रूपमा चित्रण, को Aztecs पनि युद्ध भगवान संग सम्बन्धित - Huitzilopochtli। यो एक पाङ्ग्रा, को Swastika को आकार मा आकर्षित गरे, रेज घेरिएको या बस चलाउनु एक सर्कल: स्लाव भाषाहरु देखि धेरै मतभेद छ जो नै Kolovrat, - सूर्य अर्को भारतीय प्रतीक।
इन्डोनेशिया वसोवास प्रकाश बिरालो थूथन को प्रतीक मानिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका मा सूर्य आफ्नो आँखा मा एक twinkle संग चित्रण गरिएको र मलोर्का - दुःखी। को progenitor तारा, यी दुई रोशनी मा मलायी spouses थिए, र रूसी लोकगीत मा - - बहिनीहरू स्पेन, हामी चन्द्र कि विश्वास गरे। मा जापान, प्राचीन ओपेरा कार्टून अक्षर - सूर्य को प्रतीक। र मिश्रीहरूले चमक को scarab सम्बन्धित। प्राचीन सूर्य भगवान Khepera यहाँ रोलिङ स्वर्गीय शरीर मा बादल एक कीरा रूपमा चित्रण गरिएको।
ग्रीस मा, ती विचार HELIOS, जो को पहिले नै radiance रेज र polyhanie आगो लाग्यो थियो धेरै नाम मा। अक्सर एक शक्तिशाली सुन्दर जवान रूपमा चित्रण: आफ्नो आँखा उनको कपाल हावा उड्दै, सुनको टोप वा मुकुट ढाकिएका sparkled। हरेक बिहान, उहाँले चार पखेटा घोडाहरू द्वारा आएको सौर रथ आकाशमा देखा पर्नुभयो।
सूर्य को रोमी प्रतीक - भगवान अपोलो, प्रकाश, कला, विज्ञान र कृषि को संरक्षक। आफ्नो हतियार - तीर - को रूप मा चित्रण गरिएको सूर्यका।
पुरातन Persians लागि जाँदा, तिनीहरूले प्रकाश को epitome मित्र छ छ। यो अन्धकार मानिसहरूलाई जडान प्रकाश को धारा आकर्षित।
पुरातन मिश्री पौराणिक कथाहरु मा, सूर्य भगवान Ra जसको टाउको एक ताराले पहनाया थियो मानव, एक बिरालो वा एक विशाल चील, प्रतिनिधित्व थियो। गर्मी खडेरी र गर्मी आफ्नो क्रोध आफ्नो पापको लागि मान्छे पठाइएको लाग्यो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सूर्य पनि समय सुरुतिर संग revered छ। आजकल पनि पूजा: पनि संसारको विभिन्न देशहरूमा यो Luminary समर्पित एक संग्रहालय खोल्न।
नाम को अर्थ राफेल: यो सत्य हो कि?
1988 - जनावर को वर्ष? सामान्य विशेषताहरु
एउटा नाम के हो? नाम मरियम वा मारिया को अर्थ
जोडी अनुकूलता "क्यान्सर-मेष महिला + मान्छे"
1978 - घोडा को वर्ष? धरती (पहेंलो) घोडे को वर्ष - को 2038-औं जस्तै
पत्थर तुला - को शुभंकर!
बार्स बेलग्रेड: समीक्षा, वर्णन, मेनू र ग्राहक समीक्षा
साइबेरिया लागि Ornamental shrubs: फोटो र नाम
नयाँ वोरोनिश: समीक्षा
"बीलाईन", "0 पक्कै" (महसुल)। "शून्य पक्कै" - लाभदायक मा-नेट कल
टर्की स्तन देखि व्यञ्जन
कसरी राई पीठो र अन्य व्यञ्जनहरु संग जाडो मसालेदार स्याउ लागि तयार
कसरी सेलुलर कम्पनीहरु बीच पैसा हस्तान्तरण गर्न?
कुखुरा बाट रोचक व्यञ्जन